आकस्मिक कक्षमा भर्ना हुन आएको बिरामीलाई सकुशल बिदा गर्दै चिकित्सकले बिरामीका परिवारलाई रोगको जटिलता बताए । “आधा घन्टा मात्रै ढिला भएको भए पनि ज्यानको खतरा थियो ...” “...समय रहँदै आई पुगेकोले हामी बिरामीलाई बचाउन सफल भयौँ”
सात दिन देखि अस्पतालमा भर्ती भएको बिरामीको अचानक मृत्यु हुन्छ । “के गर्नु....उपचारमा त कुनै कसर छाडेका थिएनौ तर मर्ने र बाँच्ने त कहाँ हाम्रो हातमा छ र ! “ तीनै चिकित्सकले बिरामीका परिवारलाई सान्त्वना दिन्छन् ।
विष्णु प्याकुरेल 19/9/11 6:22 PM
हामी नेपालीहरू कुराको खेती अर्थात् गफको बेपारमै मस्त हुन्छोँ । महिला हुन् कि पुरूष, वाहियात् अर्काको कुरो काट्यो बस्यो र त्यो पनि अझ चिया दोकान तीर । घरमा सिन्को भाँच्ने हैन फेरि तिन्कै कुरो युरोप र अमेरिका देखि चेचन्या सम्म पुग्छ । विज्ञान देखि भुगर्वशास्त्र सम्म नी गफ दिन भ्याएकै हुन्छन् । अझ यसमा पनि अर्काको आलोचना गर्न हामी सधैँ उत्तेजित हुन्छोँ । जुलुस र नारा को गन्ध पाउनु मात्रै के पर्छ हामी टायरको बादल थुपार्छोँ । तपाइको यो लेख निकै गज्जब लाग्यो ।
Rameshwar 20/9/11 11:21 AM
katha sarai ramro lagyo, nepalko rajniti yestai chha bhotma matrai simit, ani dr haru pani ustai hun
Bishnu Marasini 20/9/11 10:19 PM
“...समय रहँदै आई पुगेकोले हामी बिरामीलाई बचाउन सफल भयौँ”..........“के गर्नु....उपचारमा त कुनै कसर छाडेका थिएनौ तर मर्ने र बाँच्ने त कहाँ हाम्रो हातमा छ र !“ यस्तै खालका अभिब्यक्ती नेपालका डाक्टरको मात्रा नभै अरु देशका डाक्टरको पनि हुदोँ रहेछ ।
प्रकाश समीर 22/9/11 6:25 PM
हा हा हा गज्जब छौँ हामी जनताहरु पनि! जाली फटाह नेताहरु भन्दै गाली पनि गर्ने र तिनै जाली फटाहहरुलाई माथि पुर्‍याउन भर्‍याङ् बनेर घण्टौँ घाममा पनि सुकुटी हुने !!
topstuff.tk 3/10/11 12:34 PM
Ankita 11/4/13 1:56 PM
What to do for these all fellows don't know!!